SF Bay Area Myanmar American Biennial Graduation Celebration | One Myanmar Community
San Francisco Bay Area Multi-Religious Paying Respect to Elders and Praying for Peace in Myanmar
Home » What We Do » Upcoming » SF Bay Area Myanmar American Biennial Graduation Celebration
Fort McKinley, 101 Brentwood Dr., South San Francisco, CA 94080
Congratulations to the class of 2018 and the class of 2019!
OMC would like to congratulate academic achievements of newly graduated Myanmar Americans who will carry on and represent our national roots in the United States of America. Please accept our invitation and come celebrate with our new generations of Myanmar Americans professionals at Graduation Party 2018/2019. We encourage to share your professional success stories with the newly grads to inspire them to achieve greatness in their professional career ahead.
၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်များတွင် အထက်တန်း၊ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ် နှင့် ဘွဲ့လွန်တက္ကသိုလ်များ၌ အသီးသီး အောင်းမြင်ခဲ့ကြသော မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဂုဏ်ပြုပွဲသို့ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း တက်ရောက် ချီးမြှင့်ပေးပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
ဒီဂုဏ်ပြုပွဲကို One Myanmar Community (OMC) မှ နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လက်မှတ်ရ မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများရဲ့ ကြိုးစားအောင်မြင်ခဲ့မှုများကို အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ သာမက အောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အနေနဲ့ ဂုဏ်ပြုပွဲသို့ တက်ရောက်လာတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အမျိုးမျိုးတွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေကြသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရရှိနိုင်စေဖို့အပြင် မြန်မာနွယ်ဝင် လူငယ်များ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ရင်းနှီးခင်မင်နိုင်စေဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ ကျုင်းပလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ညစာလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူအားပေးခြင်းဖြင့်ပဲဖြစ်စေ၊ အလှူငွေ လှူဒါန်းခြင်းဖြင့်ပဲဖြစ်စေ ဒီအခမ်းအနားကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။
အောင်မြင်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ ။ ။ အခမဲ့။
တက်ရောက်နေဆဲ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ ။ ။ $25 (ကျောင်းသားကဒ် ပြသရန်)
ညစာလက်မှတ် ။ ။ $45
အောင်မြင် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ
ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားမှာ တစ်ဦးခြင်း မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အောက်မှာ စာရင်းပေးခြင်းဖြင့် မိမိတက်ရောက်မည်ဆိုတာကို အကြောင်းကြားပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင် မြန်မာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ဂုဏ်ယူပါ၏။
Buffet dinner will be served and included in the ticket.
Ticket & Registration info
For 2018 or 2019 graduate
Free!! Please make sure to register or below.
For student with valid student ID
: $25. Buyaticket now to reserve your spot, clicking the 'Add to Cart' button below.
: $45. Buyaticket now to reserve your spot, clicking the 'Add to Cart' button below.